Windows အတွက်အကောင်းဆုံး Android emulators (၅) ခု - နောက်ဆုံးပေါ်ပြင်ဆင်ထားသော (၂၀၂၀) - ဆော့ဝဲလ်များ
ဒီနေ့ emulators မလိုအပ်ပါ။ ထို့ကြောင့်သင်သည်သင်၏ Windows PC တွင် Android ကို run ရန် emulator ကိုသင်ရှာဖွေနေသည်ဆိုလျှင်၎င်းသည်သင်ရှာဖွေနိုင်သည်။သင်၏ Windows PC တွင် Android emulator ကိုအသုံးပြုလိုသည့်အကြောင်းရင်းများစွာရှိသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ သင်သည်သင်၏ desktop ပေါ်ရှိ Android app အမြောက်အများကိုရယူနိုင်သည်။ ထို့အပြင်ဂိမ်းကစားသူများသည်ပိုမိုကြီးမားသော screen တွင်မြင်တွေ့ရသောအံ့သြဖွယ်ကောင်းသည့် Android ဂိမ်းများကိုခံစားနိုင်ပြီးထိုစာရင်းသည်အမှန်ပင်ဆက်လက်တည်ရှိနေသည်။
ကောင်းပြီ၊ Android emulators ကိုအသုံးပြုခြင်းရဲ့အားသာချက်များကဘာလဲဆိုတာသင်သိပြီ။ ဒါကြောင့်သင်ကစမ်းသုံးကြည့်ချင်တယ်။အသုံးပြုသူများကိုပြသသည့်အလုပ်မလုပ်သော Android emulators အချို့လည်းရှိသည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်သင့်ကိုဖုံးလွှမ်းထားသည်။ PC အတွက်အကောင်းဆုံး Android emulators ၅ ခုကိုကျွန်ုပ်တို့စာရင်းပြုစုထားသည်။ဤ emulators အားလုံးသည် Windows 7, 8, 8.1 & 10 တွင်အလုပ်လုပ်နိုင်ရမည်။
ကိုလိုက်ရှာသည် PC အတွက် iOS Emulators ? ကျွန်တော်တို့ရဲ့လတ်တလောလမ်းညွှန်ကိုကြည့်ပါ။
PC အတွက်အကောင်းဆုံး Android emulators (Windows 10 & 8)
အိုကေ၊ MEmu Play သည်အခြား Windows တွင်အလုပ်လုပ်သောအခြားအံ့သြဖွယ်ကောင်းသည့် Android emulator တစ်ခုဖြစ်သည်။ထို့အပြင်၎င်း emulator သည်အက်ပလီကေးရှင်းများစွာနှင့် Android ဗားရှင်းများကိုတစ်ချိန်တည်းတွင်ဖွင့်နိုင်သည်။ ဆော့ (ဖ်) ဝဲသည်ပုံမှန်အားဖြင့် Android Nougat (7.1.2) ကိုအခြေခံထားပြီး Kit Kat (4.4) နှင့် Lollipop (5.0) နှင့်လည်းအသုံးပြုနိုင်သည်။ဒီ Emulator မှာသင့်ကို Android version သုံးမျိုးလုံးအတွက်ကွဲပြားခြားနားတဲ့ windows သုံးခုပေးထားတယ်။ ဒါကြောင့်တခြားသူတွေနဲ့လုံးဝကွဲပြားခြားနားပါတယ်။
ကောင်းပြီ၊ ရိုးသားပါစေ၊ MEmu မှာအသုံးဝင်တဲ့စွမ်းဆောင်ချက်များစွာပါတဲ့အတွက်ဒီအံ့သြစရာကောင်းတဲ့ Emulator ရဲ့အင်္ဂါရပ်တစ်ခုတည်းကိုတောင်အမည်ပေးခြင်းသည်အလွန်ခက်ခဲသောတာဝန်တစ်ခုဖြစ်သည်။
emulator ၏အကောင်းဆုံးအင်္ဂါရပ်များထဲမှတစ်ခုမှာ၎င်းသည် Intel နှင့် AMD CPU နှစ်ခုလုံးကိုပါအထောက်အပံ့ပေးသည့်အချက်သည်လိုက်ဖက်ညီသောရှုထောင့်မှကြည့်လျှင်ရိုးသားသည်။၎င်းသည်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့သိသော်လည်း၎င်းသည် Android ရှိ emulators အများအပြားတွင်မရနိုင်သောလုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
ငါတို့သိသည့်အတိုင်း emulator တွင် gameplay အတွက်အထူးကောင်းမွန်သောအချက်အချို့ရှိသည်။ ၎င်းသည်ယေဘုယျအသုံးပြုသူများအတွက်အကောင်းဆုံး Android emulators များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ခံစားရသည်။မည်သည့် Windows ဗားရှင်းတွင်မဆို emulator ကိုသင်အသုံးပြုနိုင်သည်။ ၎င်းသည် Windows7သို့မဟုတ် 10 ဖြစ်ဖြစ်၎င်းသည် Intel နှင့် AMD ပရိုဆက်ဆာများနှင့်လည်းသဟဇာတဖြစ်သည်။
ဒီမှာ BlueStacks အကြောင်းပြောကြရအောင်။ ရိုးရိုးသားသားပြောရလျှင် BlueStacks နှင့် ပတ်သက်၍ အကောင်းဆုံးအရာမှာ၎င်းသည် AMD သို့မဟုတ် Intel ဖြစ်စေမည်သည့် Windows hardware ပေါ်တွင်မဆိုလည်ပတ်နိုင်သည်။BlueStacks ကို Windows တွင်သင်သံသယဖြစ်ဖွယ်မရှိဘဲရှာဖွေနိုင်သောအကောင်းဆုံး Android emulators များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။၎င်းသည်ဂိမ်းကစားခြင်းကိုသာအကျုံးဝင်သည်မဟုတ်သော်လည်းယေဘုယျအသုံးပြုသူတစ် ဦး အနေနှင့် Windows PC တွင် Android အက်ပလီကေးရှင်းအချို့ကိုခံစားလိုပါက BlueStacks သည်သင်၏ ၀ န်ဆောင်မှုတွင်အလွန်ကောင်းမွန်သောအတုယူဖွယ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
တစ်နှစ်အတွင်းတွင်၎င်းသည်အပြောင်းအလဲများစွာကိုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးပိုမိုကောင်းမွန်သောနည်းလမ်းဖြင့်တိုးတက်လာခဲ့ပြီးလက်ရှိ BlueStacks သည် Android 7.1.2 ကိုအခြေခံထားသည့် Nougat ကိုအခြေခံသည်။BlueStack ၏ developer များက၎င်းသည်အသုံးပြုသူများအနေဖြင့်ဂိမ်းစက်အင်ဂျင်သစ်နှင့်မကြာမီတွင် BlueStacks5ကိုယူဆောင်လာမည်ဖြစ်ပြီး Android ဗားရှင်းကို Oreo ပေါ်တွင်အခြေခံလိမ့်မည်ဟုကတိပေးခဲ့သည်။
ထို့အပြင် Windows တွင် Android emulation ကိုအံ့သြဖွယ်ကောင်းသောအတွေ့အကြုံများပေးရန် BlueStacks သည် Samsung နှင့် ပူးပေါင်း၍ Galaxy Store ကို၎င်း၏ပလက်ဖောင်းပေါ်သို့တင်ပို့ခဲ့သည်။ ဒါကတကယ်အေးမြရဲ့မဟုတ်လော၎င်းသည်သင့်အား Fortnite, RAID, Sonic Forces နှင့်အခြားအရာများပါ ၀ င်သော Windows ရှိအရည်အသွေးရှိသော Android ဂိမ်းများကိုအသုံးပြုခွင့်ပေးသည်။ ငါတို့သည်စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်ပတ်သက်။ မေ့လျော့လို့မရပါဘူး။
BlueStacks သည် Android ဖုန်းများထက်သာလွန်ကောင်းမွန်သည်ဟုကုမ္ပဏီကပြောကြားခဲ့သည်။၎င်းအပြင်၎င်းတွင်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောစွမ်းဆောင်ရည်အတွက် multi-instance, key mapping နှင့် AI-based ဂိမ်းအင်ဂျင်များကဲ့သို့သောအင်္ဂါရပ်အမျိုးမျိုးရှိသည်။
အားလုံးခြုံပြောရရင်သင် Windows မှာအကောင်းဆုံး Android emulator ကိုရှာနေမယ်ဆိုရင် BlueStacks ကထိပ်ဆုံးမှာရှိနေမှာပါ။
၃။ Remix OS Player
Remix OS Player သည် Android 6.0 Marshmallow ကိုအခြေခံသော Windows အတွက်အလုပ်လုပ်သောအခမဲ့ emulator တစ်ခုဖြစ်သည်။ရိုးရိုးသားသားပြောရမယ်ဆိုရင် Remix OS Player ဟာ windows အတွက်အကောင်းဆုံး Android emulators တွေထဲကတစ်ခုပါ။ ၎င်းသည်ကွန်ယက်အမျိုးအစား၊ ဂူဂဲလ်ပလေးပံ့ပိုးမှု၊ ခလုတ်မြေပုံဆွဲခြင်း၊ အချက်ပြစွမ်းအားအတွက်လက်စွဲပြင်ဆင်ခြင်းများ၊ တည်နေရာ၊ ဘက်ထရီစသဖြင့်များစွာသောများစွာသောအင်္ဂါရပ်များပါ ၀ င်သည်။
ကျွန်တော်တို့ပိုင်ဆိုင်တဲ့လက်တော့ပ်တွေပေါ်မှာကြိုးစားပြီးရိုးသားမှုရှိတယ်၊ ဆော့ဖ်ဝဲကကျွန်တော်တို့ကိုဘယ်တော့မှစိတ်မပျက်စေခဲ့ဘူး။Stability သည်လူတိုင်းကိုရှာဖွေသည်နှင့် Remix OS player သည်ထိုမျက်နှာစာတွင်ကယ်တင်နိုင်သည်။သတိရဖို့လိုတယ်၊ Remix OS Player ဟာဖွံ့ဖြိုးမှုမရှိတော့ဘူး။ ဒါပေမယ့်သင်လုပ်နိုင်တာကတော့ Marshmallow ကိုအခြေခံထားတဲ့အဟောင်းကိုသုံးပါ။ ဒါဟာတကယ်တော်တော်လေးကောင်းစွာလုပ်ဆောင်တယ်။
4. Nox ကစားသမား
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤ emulator ကိုကြိုးစားကြည့်ပြီး၊ ကျွန်ုပ်ပြောပါရစေ။ ၎င်းသည် Gameplay optimization, Android device ၏ build ကိုပြောင်းလဲနိုင်သောစွမ်းရည်များနှင့်အတူပါ ၀ င်ပါသည်။ Prop, Controller လိုက်ဖက်မှုနှင့်လုံးဝသုံးစွဲရလွယ်ကူသည့် interface တို့ Nox Player ရှိသည့်အရာများသာဖြစ်သည်။ ဒီလိုလုပ်ခြင်းအားဖြင့် Windows မှာရှိတဲ့အခြား Android emulators များကိုရှင်းလင်းစွာဖော်ပြသည်။
ထို့ကြောင့် Windows တွင်တစ်စုံတစ် ဦး က ၀ င်းဒိုးတွင် Android emulator ကိုရှာဖွေနေသည်ဆိုပါကဂိမ်းရုံသာမကအခြားစွမ်းဆောင်ချက်များစွာပါ ၀ င်သောကြောင့် Nox Player သည်သင့်အတွက်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်လိမ့်မည်။
၎င်းသည် Android Lollipop 5.1.1 ကိုအခြေခံသည်။ သို့သော်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသည့်အပိုင်းတစ်ခုမှာသင်သည် Multi-Drive အင်္ဂါရပ်ကို အသုံးပြု၍ Nougat အထိ Android ဗားရှင်းအမျိုးမျိုးကိုသင်အသုံးပြုနိုင်သည်။ ဒေါင်းလုပ်လုပ်နိုင်သည်။
အခြား Emulators များထက် Nox Player သည်အမှန်တကယ်ကျော်လွှားနိုင်သည့်နောက်အကြောင်းရင်းတစ်ခုမှာ root access ရရှိရန်စွမ်းရည်ဖြစ်သည်။ အခြား Emulators များတွင် root လုပ်ရန်သင်ကြိုးစားဖူးပါက၎င်းသည်အလွန်ခက်ခဲသောအလုပ်ဖြစ်ကြောင်းသင်သိပေမည်။
Nox Player တွင်သင်လုပ်ရန်မှာ settings ထဲရှိ toggle ကို enable လုပ်ရုံနှင့် BOOM! - သင်အမြစ်တွယ်နေပါတယ်။ အဲဒါအရမ်းကိုရိုးရှင်းပါတယ်။ Nox Player သည်သင့်အတွက်ယောက်ျားကောင်းများအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်ပြီး၎င်းသည် Windows ရှိအကောင်းဆုံး Android emulators များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။
LDPlayer သည်၎င်း၏စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားမှုကြောင့်လူကြိုက်များလာသည်။ သငျသညျကမယုံပါလိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်သူကဖြန့်ချိခဲ့ပြီးကတည်းကဒါဟာလအနည်းငယ်အကြာဖြစ်ခဲ့သည်။ ၎င်း၏ Android ဗားရှင်းနှင့် ပတ်သက်၍ LDPlayer သည် Android Nougat (7.1.2) ကို အသုံးပြု၍ အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်လိုက်ဖက်မှုရှိစေရန်ပြုလုပ်ထားပြီးဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်လုံးဝအခမဲ့ဖြစ်သည်။အကယ်၍ သင်သည် Windows 10 အတွက် Android emulator ကိုအဓိကကစားနည်းများအတွက်ပြုလုပ်နေသည်ဆိုလျှင်မြို့ပေါ်ရှိနောက်ဆုံးပေါ် emulator သည် LDPlayer ဖြစ်သည်။
ဂိမ်းများအတွက်အက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုရှိပြီး၎င်းသည် emulator နှင့်အတူလာပြီး LDPlayer တွင်ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်အလားတူစွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုးမြှင့်လိုပါက Settings စာမျက်နှာမှ Virtualization Technology ၏အားသာချက်ကိုရယူနိုင်သည်။ LDPlayer ကရိုးရိုးရှင်းရှင်းပေးထားသည့်နောက်ဆုံးပေါ် Android emulator တစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော်တစ်ချိန်တည်းမှာပင် Windows ကွန်ပျူတာများတွင်အလွန်အစွမ်းထက်သော Android အတွေ့အကြုံသည်ဂိမ်းကစားခြင်းသို့မဟုတ်သာမန်အသုံးပြုမှုအတွက်သာဖြစ်သည်။
အမှားမရှိဘဲအမှားကင်းစွာအလုပ်လုပ်သည် emulator သည် Intel-based Windows PC များနှင့် AMD များတွင်ပင်အဆင်ပြေစွာအလုပ်လုပ်နိုင်သည်။
ဒါကြောင့်၊ အထက်တွင်ဖော်ပြထားသောစာရင်းသည်သင်၏ Windows PC တွင်အသုံးပြုရန်အကောင်းဆုံး Android emulators များဖြစ်သည်။သင်ဟာအက်ပလီကေးရှင်းတွေကိုစမ်းသပ်ဖို့ရှာဖွေနေတဲ့ developer တစ်ယောက်ဖြစ်နိုင်တယ်၊ ဒါမှမဟုတ်သင်ကဂိမ်းအချို့ကိုကစားရန်လှည့်ပတ်ကြည့်နေသည့်သာမာန်အသုံးပြုသူတစ်ယောက်ဖြစ်နိုင်တယ်၊ သင်လိုအပ်သောအကောင်းဆုံး emulator ကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။
ဤ emulators အားလုံးသည်အလွန်ကောင်းသောဖျော်ဖြေပွဲများနှင့်စွမ်းဆောင်ချက်များစွာဖြင့်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသည်။ ဒါ့အပြင်ဒီဒေါင်းလုပ်လုပ်အခမဲ့ဖြစ်ကြသည်။ ဒါ့ကြောင့်သင်နှင့်သင်နှင့်သင်၏ဂိမ်းများအတွက်မည်သည့်အရာကိုမဆိုရွေးချယ်ပြီးသင်ကိုယ်တိုင်စမ်းသပ်နိုင်သည်။
PUBG Mobile ကို PC တွင်ဖွင့်ပါ
Disney Plus သည်လား။ Live Server အခြေအနေကိုစစ်ဆေးပါ
Mac အတွက် VLC Media Player ကို Download လုပ်နည်း။
full movie ကိုအခမဲ့ online လွှင့်ထုတ်ရန်လွယ်ကူသည်
ကစားသမားနှစ် ဦး ပြိုင်ကစားနည်းများကိုပြန်ဖွင့်လိုက်သည်
www xbox com သို့သွားပါ